Uncategorized – စာမျက်နှာ 40 – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 40)
Library Technicians Job Description / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
Support librarians by supporting followers within the utilization of library catalogues, sources, and indices to locate books and by addressing concerns that want only short appointment of regular referrals. Gather information; variety and shelve books or other media; eliminate or repair register patrons; ruined textbooks or other media; and check …
Police Patrol Officers Job Description / Functions များနှင့် Duty Template ကို
Patrol designated place handle throngs, determine visitors, to implement guidelines and ordinances, reduce offense, and charge violators. Career Skills Qualification Provide for public-safety by endorsing superior community relations, responding to problems, shielding home and folks, implementing offender regulations and motor vehicle, and retaining get. သတ်မှတ်, လေ့ကျင့်သည်, and arrest perpetrators and …
ဟော်တယ်, မိုတယ်, ထိုအ Resort ကို Desk စာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ကြိတ်, ခုပ်, အရောင်တင်, နှင့် Buffing စက် Tool ကိုဆိုသည်အကြောင်း, အော်ပရေတာ, နု, သတ္တုနှင့်ပလတ်စတစ်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Jobs and Duty Sample Tend milling and associated resources that eliminate burrs or unwanted substance from areas or put in place, နှစ်ဖက်သို့မဟုတ်အနားထက်မြက်, သို့မဟုတ်ရိုက်ကူးခြင်း, စစ်, or polish plastic or metal …
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ရေအားလျှပ်စစ်မျိုးဆက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်စောင့်ရှောက်ကိုင်တွယ်လုပ်ရပ်များ. အရပ်ဌာနထုတ်ကုန် Operate, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့် gateway များကဲ့သို့, မီးစက်ပို့ပေး, နောက်လိုက်, အီလက်ထရောနစ်ပြားစီမံခန့်ခွဲ, နှင့်ဘဏ်များ. tools တွေစစ်ဆင်ရေး Check နှင့်အမြင့်ဆုံးသည်ကိုသိမှတ်ထိရောက်မှုစေရန်လိုအပ်သောပြောင်းလဲဖန်တီး. ထုတ်ကုန် upkeep Perform နှင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ်ကို fix. Job Skills Need Recognize or …
Automotive Glass Installers And Repairers Job Description / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှု Template ကို
Replace or fix windowpane glass and broken windshields in motor vehicles. Career Skills Need Eliminate, international subject, and glass that is loose from ruined regions, employ primer along windows or windows ends, and allow primer to dry. Enable all-glass areas mounted with urethane time that is adequate to cure, လေးလည်း …
Morticians, ဆောင်ရွက်ခြင်း, နှင့်စျာပနအခမ်းအနားဒါရိုက်တာယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ခံ Template ကို
တိုက်ရိုက်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များ Perform နှင့်အသုဘဖြစ်ကြောင်းပံ့ပိုးပေးထူထောင်ရန်, ထိုကဲ့သို့သော pallbearers ရွေးချယ်ရာတွင် လိုက်. ငိုကြွေးမြည်တမ်းများအတွက်ခရီးသွားပို့ဆောင်အဖြစ်, ဝိညာဉ်ရေးရာဓလေ့ထုံးစံနှင့် ပတ်သက်. အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများများစုဆောင်းခြင်းကို အသုံးပြု. အားပေးအားမြှောက်, နှင့်ရေခဲတိုက်မှကောင်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်း. Job Skills Requirement Consult with households or buddies of the deceased to set up …
ကုန်တင် forwarding ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
သုတေသနကုန်ကျစရိတ်, လမ်းကြောင်း, ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အတူသယ်မည့်အိတ်ဒါမှမဟုတ် setting များကို. ကုန်တင်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထိခိုက်စည်းမျဉ်းများ သိ. ထိနျးသိမျး. ပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ငွေစီစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာသိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်ကုန်းတွင်းပိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အဖြစ်. Career Skills Qualification Examine delivery routes to ascertain how to minimize ecological effect. Request …
ဝမ်းဆွဲကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်လုပ်အားအကူအညီများကြောင်းလက်ရှိစောင့်ရှောက်မှု. Career Skills Qualification Assist maternal physical positions that will help childbirth to be found by sufferers. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအညွှန်းကိန်းကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်အလုပ်သမားစဉ်အတွင်းမိခင်ပြဿနာ Check, စောင့်ကြည့်ကျုံ့. Provide relaxation and convenience actions for mothers in labor through treatments such as for example …
ဆီးရောဂါပါရဂူယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
အစက်အပြောက်, လိပ်စာ, အကူအညီကျောက်ကပ်ဂလင်းနှင့်အတူကင်ဆာနှင့်ကင်ဆာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စနစ်၏တိကျသောအခြေအနေများတားဆီး. အလုပ်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ကြောင်းအလုပ်သမားများကသွန်သင်သို့မဟုတ်ကွိုတငျပွငျဆငျ. စံချိန်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်တစ်ဦးချင်းစီ’ စာပို့. urology ချိန်းနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများသို့မဟုတ်ဆရာဝန်များ. မှလူနာအကြံပြု …
စက်ခေါင်းအင်ဂျင်နီယာများကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
လျှပ်စစ် Generate – ရေကြောင်းသို့မဟုတ်လူတွေကိုရွှေ့ဖို့လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ဂတ်စ်တာဘိုင် -electric အင်ဂျင်. မီးရထားမီးရထားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖတ်ပါ, လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ညွှန်းကိန်း, နှင့်အမိန့်နှင့်စည်းမျဉ်း. Job Skills Prerequisite Monitor indicators or metres that evaluate pace, အဓိကရေလှောင်ကန်တွင်သို့မဟုတ် brakelines အတွက် amperage သို့မဟုတ် Air-ဖိအား. အဆီးအတားအသိအမှတ်ပြုရန်မော်နီတာစောငျ့ရှောကျ. …
စာမျက်နှာ 40 ၏ 56« ပဌမ...102030«3839404142 » 50...နောက်ဆုံး »